Gabar ardayad ah oo mindi isku dishay degmada Ceerigaabo – SomaliaOne News Network
Aug 14, 2016 BANDHIGGA
By Tajuddin Degmada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag ee dalka Soomaaliya.
Erigavo, Sanaag region, Somalia ( SOMALIAONE.NET) – Nimco Axmed Jamac oo ka mid ahayd ardayda dhamaysatay fasalka Sideedaad (8-aad) ee dugsiga hoose/dhexe ee Imaamu Shaafici oo ku yaalla degmada Ceerigaabo ayaa nafta iskaga jartay Mindi ay dhuunta isaga beegsatay saaka aroornimadii.
Nimco ayaa illaa shalay ka walwalsaneyd sida ay sheegeen qoyskeedu natiijada uga soo baxday Imtixaankii ay la gashay ardayda kale ee gobollada uu maamulo Maamulka la magac baxay Somaliland ee waqooyi galbeed Soomaaliya, kaasi oo ay ka mid noqotay 603 arday oo ku dhacay Imtixaanka .
Nimco oo da’deeda lagu qiyaasay inta u dhaxeysa 14-15 jir ayaa shaqaallaha isbitaalka guud ee Ceerigaabo isku dayeen inay xaaladeeda nolol ku gaaraan, balse dadka deegaanku waxay sheegayaan inay markiiba ay naf ka baxday .
Wasaaradda waxabarashada ee Maamulka Somaliland oo dhammaadka todobaadkii hore shaacisay natiijooyinka ardayda u fariistay imtixaanka dugsiyada dowliga ah iyo kuwa gaarka ah ee manhajka la wadaaga waxa ay sheegtay in sanadkan uu ahaa kii tirada ugu badan ee ardaydu ku dhaceen imtixaanka.
Dhacdadan xanuunka badan ayaa imaaneysa xilli dowlado ka tirsan qaaradda Afrika ay qaateen nidaam lagu fududaynayo imitixaanaadka ardayda walwalka faraha badan ku haya.
Wadamada nidaamka cusub qaatay waxaa ka mid ah South Africa , Tanzania, iyo Kenya oo baarlamaankeedu uu meel mariyay nidaamka cusub.
Dhacdadan ayaa ah mid gudbineysa fariin xanuun badan oo ku aaddan sida ay muhiim u tahay in dib loogu noqdo nidaamka waxbarashada ee deegaannada uu Maamulo Maamulka Somaliland oo u baahan in dib u eegis lagu sameeyo, gaar ahaan nidaamka imtixaanaadka, inta aaney xaaladdu faraha ka bixin.
Degmada Ceerigaabo, Erigavo, isbitaalka guud ee Ceerigaabo, Sanaag region, Somalia tweet Loading...
Madaxweynaha Puntland oo sheegay in Gobollada Sool iyo Sanaag ay ka tirsan yihiin maamulkiisa
Read previous post:Dadka degan Burco oo ka cabanaya biya yari daran oo soo wajahdayBurco, Gobolka Togdheer, Soomaaliya ( SOMALIAONE.NET) - Dadweyne ku dhaqan magaalada Burco ayaa ka cabanaya biyo yaraan soo waajhaday magaalada,...Close